E Book Download | Myanmar Blog
မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ E Book စာအုပ်လေးတွေရယ် နိုင်ငံခြား Soft Copy E-Book တွေခေါ်မလား Download လုပ်နိုင်တဲ့ Link လေးနှစ်ခုတင်ပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြာရင် မေ့တတ်လို့ အမှတ်ရအောင် သိမ်းထားတာပါ။
www.freebookspot.com တော်တော်လေး အဆင်ပြေတဲ့ဆိုက်ပါ စာအုပ်တွေ သိပ်မများပေမယ့် Download လင့် ကို နှစ်ခု ကနေ လေးခုထိ ပေးထားတာကြောင့် Download ဆွဲရတာ အဆင်ပြေမှာပါ။ တတ်နိုင်လို့ ဝယ်မယ် အိမ်အရောက် စာအုပ်လာပို့လို့ ဆိုသူတွေအတွက် Amazon.com နဲ့ Link ချိတ်ပေးထားတာလေးလဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ (ဆိုင်ဖွင့်လောက်တဲ့ အထိတော့ရတယ်။ စာကြည့်တိုက် အတွက်တော့ မလောက်ဘူး။ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ Linux အတွက်တောင် (၇၉) အုပ်ရှိတယ်ဗျာ။)
http://www.dbebooks.in/ Update 25.09.2008
Learning E-Book Download စာရင်းထဲလည်း ထည့်ထားပေးလိုက်ပါပြီ။
နောက်တစ်ခုကတော့ တစ်မျက်နှာ ကနေ စာမျက်နှာ (၇၀) ကျော်ထိပါနိုင်တဲ့ မြန်မာဘာသာနဲ့ရေးတဲ့ နည်းပညာ စာအုပ်တွေပါ။ PC Magazine ရဲ့ E-book တွေလည်း တင်ထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ www.daylightonline.co.cc နဲ့ www.daylightonline.wordpress.com မှာ Link တွေပေးထားပါတယ်။ Download Link နှစ်နေရာ လောက်တော့ ပေးထားပါတယ်။
မြန်မာ e-Book များ စာရင်းထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။
Thank to Aithox & 227
နောက်ပိုင်း Ubuntu (Linux OS) နဲ့ Electronic (Basic to PIC) အကြောင်းလေးတွေ တတ်နိုင်သလောက် ရှာဖွေတင်သွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ November လလောက်မှ စတင်ပေးနိုင်မှာပါ။ (မကြာမှီ လာမည် ခုလာမည် လာချင်မှလဲ လာတော့မည်။ မျှော်ရန်မလို ….. )
~ by Ko Ko Ye` on September 24, 2008.
10 Responses to “E Book Download”
ကျနော် အစ်ကိုကို အကူအညီလေး တောင်းချင်ပါတယ်။
ကျနော်လည်း အစ်ကို wordpress မှာ ဘလော့ ၀င်ရေးနေတဲ့သူပါ။
ဘလော့မှာ ပို့တင်တဲ့အခါ ၀ါကျတွေက အထက်အောက် ကပ်လွန်းတာ
တို့ ၀ါကျတွေက ရှည်ထွက်လာတာတို့ ကြုံရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပို့
အသစ်တစ်ခုတင်တိုင်း အချိန်တော်တော်ပေးရပါတယ်။ တခါတလေ
ရေးချင်စိတ်မရှိတော့လောက်အောင်ကိုပဲ ဖြစ်မိပါတယ်။ ကျနော်က
Microsoft Word မှာ အရင်ရေးပြီးမှ Copy–> Paste လုပ်တာ
ပါ။ အဲဒါ ပို့တွေကို ဘယ်လို ညှိရမလဲ ကူညီပေးပါဦးဗျာ။
myownschool said this on	October 4, 2008 at 1:47 am | Reply
Thein Su said this on	October 4, 2008 at 1:51 am | Reply
ကောင်းတယ်ဗျ.. ခင်ဗျား အီးဘွတ်တွေ.. အားရင် ဒေါင်းပစ်ရမယ်… အူဘန်တူး ဆာဗာကို မသိသေးဘူး.. fedora တို့ slax တို့နဲ့ ဘာတွေများ ကွာလဲမသိဘူး
tweetycoaster said this on	October 7, 2008 at 9:27 am | Reply
Hiya Mr Tweety ရေ ဘာမှမကွာဘူး အကုန်းလုံးနဲ့ပေါင်းနေတယ်။ အဲလေ အကုန်လုံးကို ပေါင်းထည့်ထားတာ Ubuntu မှာ။ Ubuntu က GUI ကိုအသားပေးထားပြီး Vista ထက် နဂိုကတည်းကမိုက်တယ်။ CLI မသုံးလဲ ရတာတွေ၊ Install အရင်လောက် မခက်တော့တာတွေ (အခု Windows ထက်နှစ်ဆ လွယ်တယ်။) ကြောင့် User တွေက ပိုသုံးလာကြတယ်။ Linux ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Server ဘက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ Fedora တို့ RedHat တို့ရဲ့ RPM တွေကို deb ပြန်လုပ်ပြီး ထည့်ထားတာလေ။ webmin တွေနဲ့ပါ အကုန်ပြန်ရေးပြီး Apache, Squid, SMB, FTP အကုန်လုံး Webmin ကနေ လှမ်းပြီး GUI ကထိန်းဖို့ လုပ်ပေးထားတာတွေ ပါတယ်လေ။ 🙂 အဲတာကြောင့် ဘာမှမကွာဘူး အကုန်ပေါင်းတယ် အဟီး 😀
kokoye said this on	October 7, 2008 at 6:05 pm | Reply
အကို site ကိုကျန်တော်ခုမှတွေတာ၊ http://www.mgtrojan.tk ကနေတွေ့တာ။
မိုက်တယ်ဗျာ။ ခိုက်သွားပြီး။ အားပေးလိုက်ဦးမယ်။
007thura said this on	October 9, 2008 at 9:41 pm | Reply
မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ ကွန်ပြူတာအခြေခံ ဘယ်မှာဒေါင်းလို့ ရသလဲခင်ဗျ။ ကျတော့်အမေအတွက်ပါခင်ဗျ။
တူးတူး said this on	November 5, 2008 at 3:53 am | Reply
အခြေခံဆိုတာ သဘောတရားလား လေ့ကျင့်ခန်းကိုပြောတာလားခင်ဗျာ။ အရင်ကတော့ ဆရာ ကိုရဲ ရဲ့ Services + က စာတွေကို ကူးခိုင်းတာများပါတယ်။ http://svptraining.com/ မှာ ရှိတဲ့ SWF Flash ဖိုင်တွေထဲ က သင့်တော်တာလေးတွေ ယူသွားကြည့်လိုက်ပါ။ နောက် MZ ရဲ့ EDU မှာလဲ အခြေခံတွေကို PDF တွေ ယူပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
kokoye said this on	November 5, 2008 at 2:14 pm | Reply
ကွန်ပြူတာအခြေခံအတွက် ကျနော်လက်ဆော့ထားတာတော့ရှိတယ်။ ရေးခဲ့တာ ကြာပြီဆိုတော့ ဒိတ်တော့ အောက်နေပါပြီ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် တစုံတရာများ အိုကေမလားလို့ပါ။
http://www.mediafire.com/file/c7gdmfsbacg/Basic Windows & MicrosoftWord.doc
http://www.mediafire.com/file/mzhetmtzgdv/Basic Windows & MicrosoftWord.pdf
MZ မှာလည်း တင်ထားတယ်။ ခုက တိုက်ရိုက်လင့်ပါ။
Zulu said this on	November 27, 2008 at 8:31 pm | Reply
အစ်ကိုရေ..ကျွနတော် ဦးလှဝင်း(လေသူရဲတစ်ဦး)ရေးတဲ့ ပါဗီလွန် နဲ့ ဗင်ဂို စာအုပ်ကိုဘယ်မှာ download လို့ရနိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ..ဒီ site ထဲမှာရှာလို့မတွေ့လို့ပါ.ကူညီပါဦးခင်ဗျာ.
aomkham said this on	March 7, 2009 at 12:54 pm | Reply
http://svptraining.com က မရှိတော့ဘူးဗျ။ သူ့ဆီက internet သင်ခန်းစာလေးတွေ ရှိသေးရင်မျှပါဗျာ။
ko lu chaw said this on	September 24, 2009 at 5:20 pm | Reply